Ufuna ezinye izindlela ze-AIDA64 ne-Everest kuLinux? | Kusuka kuLinux
I-Everest ne-AIDA64 yizinhlelo ezimbili ezithandwa kakhulu yiWindows. Mhlawumbe uma uvela kulolu hlelo lokusebenza futhi ufike ku-GNU / Linux uyazibuza ukuthi ngabe zikhona yini izinhlelo ezinesibonisi sokuqhafaza esifana nazo. Iqiniso ukuthi kunezindlela ezimbalwa, zombili i-console kanye ne-GUI. Sizokhuluma kwenye indatshana mayelana nezinketho ezisuselwa embhalweni esingazisebenzisa kukhonsoli yethu ukuze thola lonke ulwazi lwehadiwe nohlelo, kepha kule ndatshana sizogxila kokunye okungcono kakhulu okunesibonisi sokuqhafaza ...
Izindlela ezimbili zemithombo evulekile nevulekile, ezisinika i-GUI elula neqondile efana ncamashi nalokho esingakubona ezinhlelweni ezinjengalezo ezishiwo esigabeni sokuqala se-Windows, UHardinfo noSysinfo. Bobabili banesibonisi sokuqhafaza esinohlu ngakwesobunxele lapho ungakhetha khona okufakiwe kwemenyu namamenyu amancane ukubuka imininingwane ethile ngemishini yethu, kungaba uhlelo, iprosesa, inkumbulo, i-motherboard, amadivayisi wokugcina, ibhethri, imemori khadi. , njll.
Ukulawula i-hardware esiyifakile kwimishini yethu nokwazi eminye imininingwane efana nokwenziwa nemodeli kungabalulekile ukwenza izinqumo ezithile. Ngokuphathelene nokwandisa idivayisi (esimweni se- Hardinfo Ngifaka namathuluzi wamabhentshi) noma mane ngibheke abashayeli abafanele. Ngakho-ke, ukuba nezinhlelo ezinjengeHardinfo kanye ne- Sysinfo efakwe ohlelweni lwethu kungasisiza kulezi zimo. Ngaphezu kwalokho, ukufakwa kwayo kulula, ngoba imvamisa kufakwa ezinqolobaneni zama-distros amaningi, ngakho-ke ngomphathi wephakheji oyithandayo ungafaka ...
Ngale ndlela, ngiphawule ukuthi kwenye indatshana singabuyekeza amathuluzi wemodi yombhalo angasetshenziswa ukuthola iphrofayili yehadiwe lethu. Kepha angithandi ukuqeda i-athikili ngaphandle kokukhuluma nge umtapo wolwazi ovulekile shayela cpu_feature ukuthi mhlawumbe uma ungumsebenzisi othuthuke kakhulu noma ucabanga ukudala uhlelo ukuthola imininingwane yohlelo (x86, MIPS, ARM, kanye NAMANDLA), mhlawumbe ungaba nentshisekelo. Iqiniso ukuthi ngisebenza nomsebenzi naye futhi ngikuthola kujabulisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ufuna ezinye izindlela ze-AIDA64 ne-Everest kuLinux?
Ngabe kukhona okungalandwa kusuka ku-apt-get ka-debian?
Uma ungayiboni, zama ukungeza amakhosombe angewona amahhala noma ubone ukuthi udinga ukwengeza okugciniwe kwangaphandle kokusemthethweni kwe-Debian.
Kube wusizo olukhulu, ngikwazile ukulanda iHardinfo futhi ekugcineni ngazi ukuthi ikhompyutha yami inekhamera enjani, ngithemba ukuthi ekugcineni ngiyokwazi ukuyivula.
Ukusesha i-Octopi ye-Arch (AUR) ngithole 'i-nex'.
Kusuka esigungwini, i-'dmidecode 'inikeza imininingwane nge-MB, iprosesa nememori.
Yebo, impela. I-dmidecode nayo yaziwa kahle ngokubonisana namatafula anemininingwane yehadiwe njalonjalo. Sengivele ngibhale enye indatshana ngaye: